History of the Burger King logo | Famoronana an-tserasera
Tsy isalasalana izany Burger King dia orinasa iray izay anisan'ny fiaraha-monina misy antsika hatry ny ela. Fa inona no fantatrao momba ny tantaran'ny marika Burger King? Indraindray, ny fijerena ireo marika efa ela dia afaka manampy anao hamboly tetikasa, na hianatra fotsiny hoe inona ny singa ovaina amin'ny endrika sary hanatsarana ny logo.
Amin'ity tranga ity hifantoka amin'ny tantaran'ny Burger King isika ary ho fantatrao hoe inona ny logo voalohany nataon'izy ireo sy ny fiovan'izy ireo nandritra ny taona maro ho amin'izao fotoana izao, ary noho izany dia manatsara ny maha-izy azy ny maso manoloana ny fiovan'ny lamaody sy ny fivoaran'ny fiaraha-monina. Ataovy?
1 Oviana no namoronana Burger King?
2 Ny tantaran'ny logo Burger King dia ny fivoaran'ny "fiainany"
2.1 Ny logo voalohany Burger King
2.2 Andrana faharoa hisongadina
2.3 1957 no taom-piovana
2.4 Ny taonan'ny revolisiona
2.5 Facelift tamin'ny 1994
2.6 Famoronana vaovao
2.7 Miverina amin'ny 1994 isika
Oviana no namoronana Burger King?
Tsy azo lazaina fa nanana lalana rarivato feno raozy ny Burger King satria tsy izany. Ny daty manan-danja voalohany amin'ny tantarany dia 1953.
Amin'izany fotoana izany dia any Jacksonville, Florida isika, izay misy Insta Burger King napetraka ao an-tanàna.
Na izany aza, Herintaona taty aoriana, toa tsy nandeha tsara ny orinasa ary nanomboka nanana olana ara-bola izy ireo. Noho izany, mpandraharaha roa, David Edgerton sy James McLamore, no nividy ny orinasa hamerenana azy io. Ary noho izany, ny fanapahan-kevitra voalohany raisin'izy ireo dia ny fanafohezana ny anarany ho Burger King.
Saingy tsy nisy izany fanovana anarana izany ny "ozon'ny Burger King" tsy hisy fiantraikany amin’izy ireo izany. Ary tsy izy ireo ihany, fa izay rehetra nandalo, nifandimby. Azo lazaina fa nanana « dada » maro ny Burger King hatramin’ny farany, ny tarika Restaurant Brands International.
Ny tantaran'ny logo Burger King dia ny fivoaran'ny "fiainany"
Raha mitadidy ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia tsy isalasalana fa ny tantaran'ny marika Burger King dia tsy ho fohy. Nanova ny fango im-betsaka izy, na dia tamin'ny 1969 aza dia nitazona ny fototra ary tsy nisy afa-tsy fikasihana sy "facelift". Ahoana anefa izany? Andeha hojerentsika ny fivoarany.
Ny logo voalohany Burger King
Mba hahafantarana ny logo voalohany amin'ity marika ity dia tsy maintsy mandeha amin'ny andro namoronana azy isika, izany hoe ny taona 1953. Araka ny tsaroanao, Insta Burger King no anarany, fa tao amin'ny logo dia tsy hita ny teny hoe "Insta".
Izany dia isotype, izany hoe ny soratra Burger King ary, eo amboniny, masoandro toy ny hoe mipoitra. Tsy ilaina ny milaza fa volo fotsy daholo izany.
Ho an'ny mpamorona dia fomba iray hilazana fa mitombo ny sakafo haingana ary fanombohana izany, na dia mbola manomboka aza, dia ho zava-dehibe.
Fa nijanona teo.
Andrana faharoa hisongadina
Ny taona nanaraka, rehefa nandray ny fahefana i Edgerton sy Mclamore, dia nanapa-kevitra izy ireo manala ny masoandro, ary ny teny Insta. Noho izany dia namorona logo amin'ny tena hevitry ny teny izy ireo. Ny tiako holazaina dia nampiasa Burger-King izy ireo. Dia izay.
Notazonina ho sahisahy tamin'ny sisiny rovitra ny endritsoratra, saingy tsy nisy haingo.
1957 no taom-piovana
Tonga ny loko. Ary koa fanondroana ny fandikan-teny sy ny heviny ara-bakiteny ny anarana. Ahoana ny logo?
Eny ary, andao isika handeha amin'ny ampahany. Voalohany dia tsy maintsy mpanjaka mipetraka sy misotro vera lehibe (misy mololo). Mipetraka eo amin'ny hamburger izy ary miantehitra amin'ny marika milaza hoe Burger King sy baseline iray mivaky hoe Home of the Whopper.
Ary izany rehetra izany amin'ny loko.
Fango saro-takarina izy io, misy singa maro tsy maintsy jerena, ary manaitra raha oharina amin'ireo teo aloha rehetra izay hitantsika hatreto. Saingy nitondra fiovana izany sy ny zavatra namidiny: hamburger sy zava-pisotro.
Tsy ratsy izany, raha nitazona izany nandritra ny 12 taona izy ireo.
Ny taonan'ny revolisiona
Ary 12 taona taty aoriana, tamin'ny 1969, dia nisy fiovana, ary angamba ilay iray izay mitovy amin'ny ankehitriny satria vitan'izy ireo ny nitazona izany tamin'ny fanitsiana vitsivitsy monja.
Manao ahoana Alao sary an-tsaina àry ny mofo hamburger. Eny ary, indrindra roa mavo na crème miloko hamburger bun tampon. Ary, eo afovoany, ny teny Burger (ary eo amin'ny andalana manaraka) King. Eny, izany no logo noforonin'izy ireo tamin'io daty io.
Amin'ity tranga ity, ny Ny typography dia nanome lanja kokoa ny teny hoe King fa tsy ny Burger (izay somary kely kokoa ny habeny. Toy izany koa, karazana sora-baventy boribory sy mivolombolamena, mena.
Fango tena nanaitra tokoa tamin'izany fotoana izany ary tena nalaza noho ny fomba nampifandraisany ny sehatra misy azy amin'ny logo. Ary ny marina dia tsy nisy fiovana firy nanomboka tamin'io daty io (afa-tsy tamin'ny fotoana iray izay nipoiran'ny "ondry mainty").
Facelift tamin'ny 1994
Ny fitazonana ny logo izay efa nananany tamin'ny 1969, tamin'ity tranga ity tamin'ny 1994 dia nanapa-kevitra izy ireo hanova ny typography ny Burger King lahatsoratra ary ataovy mandanjalanja kokoa, miaraka amin'ny litera mivaingana ary amin'ny loko marevaka kokoa, mena matanjaka amin'ny voasary. Vao mainka nisongadina izany.
Tamin'ny taona 1999 dia nanao fanovana vaovao tamin'ny logo ny marika. Raha izany dia dia naniraka azy avy amin'ny masoivoho Sterling Brands ary, na dia nitazona ny fototra aza izy ireo, izany hoe ny hamburger bun sy ny anarana eo afovoany, dia nanome fiantraikany mavitrika kokoa. Voalohany indrindra, nataon'izy ireo ho toy ny vony ny mofo. Fanampin'izany, nohalehibeazin'izy ireo bebe kokoa ny litera, hany ka nivoaka avy tao amin'ny mofo izy ireo. Ary farany dia nampiditra crescent manga izy ireo, matevina kokoa noho ny ambony.
Raha ny marina, ity logo ity dia mety ho tadidinao fa tsy ny ankehitriny, satria tamin'ny 2021 dia nanova izany indray izy ireo.
Miverina amin'ny 1994 isika
Tadidinao ve ilay logo nolazainay taminao tamin'ny 1994? Eny ary, afa-tsy ny tweaks vitsivitsy, dia ny logo izay tamin'ny taona 2021 no nampiasainy indray.
Ary izany no tian'izy ireo manome "retro" sy nostalgique ny orinasa. Raha ny marina dia voalaza fa tohin'ilay tamin'ny 1969 izy io saingy hitanay mifandray kokoa amin'ilay tamin'ny 1969. Ny hany mahasamihafa azy dia ny fitambarana iray manontolo dia voarafitra amin'ny sisin-tany fotsy fotsy.
Fantatrao izao ny tantaran'ny logo Burger King, iza no tianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tantaran'ny logo Burger King